Hello Nepal News » नेइमार फर्काउन बार्सिलोनाले कुन–कुन खेलाडी दिँदैछ ?
नेइमार फर्काउन बार्सिलोनाले कुन–कुन खेलाडी दिँदैछ ?
एजेन्सी, साउन २९
स्पेनिस बार्सिलोना पूर्वस्टार नेइमार अनुबन्धको नजिक पुगेका रिपोर्ट आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित समाचारअनुसार फ्रेन्च क्लब पिएसजी र बार्सिलोनाबीच नेइमार किनबेचका लागि समझदारी बन्ने प्रबल सम्भावना छ ।
बार्सिलोनाले पिएसजीसँग खेलाडी दिएर रकम थप्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको बुझिएको छ । जसमा बार्साले पिएसजीलाई दिने खेलाडीको सूचीमा ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिपे कोउटिन्हो पहिलो नम्बरमा छन् । उनलाई बार्सिलोनाले डेढ वर्षअघि इंग्लिस क्लब लिभरपुलबाट अनुबन्ध गरेको थियो ।
गत सिजन बार्सिलोनामा कोउटिन्होले कमजोर प्रदर्शन गरेपछि बार्सिलोना उनलाई बेच्ने योजनामा छ । ठीक यतिबेला बार्सिलोना नेइमार फर्काउने दौडमा रहेकाले कोउटिन्होलाई बिदा गर्न बार्सिलोनाका लागि यो सबैभन्दा सही समय हुने उसले ठानेको छ ।
खबरअनुसार बार्सिलोनाले नेइमारका लागि कोउटिन्होसहित क्रोएसियन इभान राकिटिक र १०० मिलियन युरो रकम दिन तयार छ । तर, पिएसजीले भने नेइमारको डिलमा कोउटिन्हो र फ्रेन्च विंगर उसामान डेम्बेले चाहेको फ्रेन्च मिडियाले जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २९ श्रावण २०७६, बुधबार १६:२७